Inqubekela neze sisesenjalo, futhi usiza umuntu ukuthola izinga eliphezulu wenduduzo. ethandwa kakhulu namuhla iba umtshina motion ukuze uvule izibani. Izici zako nemisebenzi sizobuye kubhekwe.
Kuyini ukutholwa kokunyakaza?
Ukunyakaza Inzwa - idivayisi ezikhethekile olungaqhathaniswa kufaneleke chasiselwe imishini. Isimiso esiyisisekelo emsebenzini wayo wukuthi uma into engena endaweni Ukusabalala ke ngokusebenzisa izinzwa esakhelwe ukuthola ukunyakaza futhi kutshela isibani, ngemva kwalokho-ke likhona. Ukusetshenziswa amadivaysi ezinjalo kuba cishe esisemqoka izindlu ezinkulu. Ngokwesibonelo: kukhona umhubhe omude, lapho isibani okhanyisa nge motion inzwa ekuqaleni nesiphetho. Lapho umuntu engena ekamelweni, wabe ngokushesha fixed kanye ukukhanya esitshalweni. Uma into isuswe, izibani zivaliwe.
Izinhlobo ezinkulu izinzwa
Kuze kube manje, kukhona izinhlobo ezinjalo ukukhanyisa motion izinzwa: amadivayisi amakamelo (ngaphakathi) futhi ongaphandle (yangaphandle). Izinzwa nazo zihlukaniswa uhlobo okuwuphawu futhi nesayithi libe ukufakwa.
Umgomo we operation ye-mkhosi emgwaqweni ngokuyisisekelo liqukethe ukubala ibanga. idivayisi olunjalo luye elawulwa endaweni ezithile egcekeni futhi ekahle kakhulu ukusetshenziswa emizini yabazalwane nasezindaweni ezigcina impahla. Ilayisense yomkhiqizo omningi osemqoka ukukhanyisa emgwaqweni has anhlobonhlobo Ukusabalala - kusuka ngamamitha 100 kuya ku-500. Kukhona futhi amadivayisi ongasebenza at amabanga okukhulu. Lezi izinzwa kaningi ziyadingeka floodlights kohlobo oluthile, ngakho-ke qaphela lapho kukhethwa amadivaysi.
Igumbi noma ikhaya inzwa ingafakwa kuphi efulethini. Umehluko omkhulu zikuthola mgwaqo zedivayisi ukuthi akakubekezeleli okushisa eqisayo.
Futhi, lezi amadivaysi ingahlukaniswa kuncike amaphuzu okunamathiselwe odongeni ophahleni. Lezi amadivayisi kuhluke inqubo ukubekwa, futhi ngeke ziyafana phezu uhla isignali esiphelweni ekuthwebuleni. Ceiling inzwa has a umfutho okukhulu, kodwa futhi ungaba odongeni imibhobho ngaphandle.
Ogibele Uphenyo akumele wathumela ukukhanya ngqo kusuka izibani. Le ndawo ishayela esiphelweni kuyinto efiselekayo lahla izinto ezihlangene amazwe angaphandle, okuyinto kuphazamise ukusebenza kahle zedivayisi. Futhi kule moto wokuhlola indawo akufanele kube izithiyo, ngisho ezenziwe ngengilazi, ngoba uzoba nomthelela ongemuhle kakhulu motion inzwa ukukhanyisa. Izici eziyisisekelo at idivayisi, - ibanga bangabonwa futhi ngokunyakaza. Ukuze operation kahle imisebe kufanele kufinyelele kuzo zonke amakhona egumbini. Uma kungenjalo, kufanele abeke emasethi lambalwa ukuze ukwazi wasithatha sonke isikhala.
Ukuze uthole Igumbi unxande izinzwa badinga kuphela pie amashadi, okuyinto kuthiwa sawela. Empeleni, wonke amadivaysi namuhla okusaqanda noma isiyingi iphethini ukuthola.
Ububanzi motion izinzwa
Ngokuvamile lezi amadivayisi labo esetshenziswa uthemba ubuciko afuna ukuyidlulisela lo mshini wusizo kokulawulwa ukukhanyisa indawo oyifunayo ngesikhathi esithile. Izinzwa asiza engakhubeki ebumnyameni, siphumputha ukushintsha fixed kanye okwethusa inkalankala izivakashi engadingeki uma kunesidingo.
Ngokuvamile, ukufaka motion izinzwa ukuze ukukhanya ikhiqizwa emnyango, izitebhisi engaphansi futhi kulelo gumbi, yokugezela, endaweni kahle ovuthayo emini, kodwa zidinga izinga okusezingeni eliphezulu Hambayo ukukhanyisa ebusuku. Ukuze yokugezela ethoyilethi kungaba kuhle ukufaka inkinobho ukukhanya nge inzwa motion, njengoba abaningi ukuwukhohlwa ngokukhanya, ushiya kusukela lapho.
Uma kudingeka, idivayisi kungenziwa amisiwe ukufaka, okuhambisana nokukhanya a kumadivayisi ambalwa ngaphezulu egumbini, njenge-TV noma i-conditioner emoyeni. The best futhi elula inketho alamu ukufakwa kumagumbi kakhulu kuyinto ekhuthaza nge inkinobho ezivamile. Onjalo wesifunda ohlanganisa motion inzwa ukukhanyisa, emiyalelweni noma idivayisi idatha sheet. Ngaphambi ukusebenza uqinisekise ukuthi ufunda bhukwana imfundo kanye, yebo, ukulandela izincomo zayo.
Indlela ukukhetha indawo inzwa
Esinye sezimo esiyinhloko idivayisi ukuze isebenze kahle - indawo ukufakwa kwalo. Uyavuma ukuthi kusukela iyunithi ngeke kube kuhle uma ukukhweza yakhe kude izindawo ukunyakaza komuntu. Ngakho-ke, kubalulekile ukuba ukhuphule inzwa ncamashi lapho umsebenzisi iqala ukungena endaweni emnyama noma egcekeni isikhala.
Kubalulekile futhi ukusetha orientation efanele switch, ngoba ukuthi cishe yonke imishini zenzelwe ukuze ukwazi ngokuzenzakalelayo ukuthumela amaza okushisa endaweni oyifunayo. Ukubeka motion inzwa ukukhanyisa kumele kwenziwe ngendlela yokuthi idivayisi wabanjwa kahle khona umuntu othunyiwe endaweni umsebenzi umshini. Uma ucabanga ngendawo ukufaka lisebenze, kufanele kube iphuzu esiphezulu ku isakhiwo odongeni noma igumbi.
Ukuze aphethwe kahle ukufakwa kanye ukulungiswa motion inzwa ukukhanyisa, akudingeki amakhono akhethekile. Kuyinto kuphela kudingekile makuqoqwe bese uxhuma yezingxenye esihambisanayo (izintambo) mkhosi. Ukuze wenze izinto ezinhle, kudingeka usebenzise okuhlangana ibhokisi ekhethekile. Ukuze idivayisi ngamunye inikeza iziqondiso zalo siqu. Kubalulekile futhi ukukhumbula ukuthi inzwa engcono kahle ezindaweni lapho ngeke ucasulwa ukunyakaza lezinto angaphandle.
Ukubeka ukukhanyisa motion inzwa kwenziwa potentiometers. Ngokuyinhloko ezintathu izingxenye esetshenziselwa izimoto:
Futhi, qiniseka ukuthi Ukusetha isikhawu esiphezulu phakathi ukuvela futhi isignali photocell. Uma sibekezelele ngokokuqala ngeke kushintshe isithombe, umshini ngeke ngokuzenzakalelayo cisha izibani nokushaya komoya, kanye noma yini okunye ixhunywe ke.
Ngemva amaphutha kokufaka kudivayisi seliqediwe, kufanele wenziwe adjustable motion inzwa ukukhanyisa. Zonke isikimu izilungiselelo kuchazwa imiyalelo kudivayisi. Ezimweni eziningi, amadivaysi zilungiswa ukuze uvule amapharamitha amabili - isikhathi simiselwe ukusebenza bese uvula iyunithi sincike ezingeni ukukhanya kuma. ezinhle Ikakhulukazi kuyadingeka ukuze ulungise kulezo zindawo lapho usuku lingena ukukhanya sosuku, ngoba zonke ezinye izimo, ungavele usethe nemingcele ubuncane. amadivaysi Iningi ukuthi seziyatholakala, angavumela isikhathi ukusetha inhlanganisela kusukela imizuzwana embalwa kuze kufike emizuzwini eyi 10.
Okwamanje, umdwebo wiring we ukukhanyisa motion inzwa akekho noyedwa, eziningi zazo. Izinketho ezehlukile ayadingeka ukuze kuqinisekiswe ukuthi ngamunye abasebenzisi angakhetha design esikahle futhi zikhululekile bona.
Umsuka yezindlela samanje ejwayelekile. Kuyadingeka ukuxhuma kwentambo isigaba (220) ukuvumela ngokusebenzisa umshini bese uxhuma ngqo kudivayisi. Ngemva umqhubi kokungathathi hlangothi endaweni ekahle ukuze oyisebenzisayo kufanele ukuhlakaza phezu Windings ezimbili, eyokuqala kudivayisi samaqanda, kanti eyesibili kudlulela okufanayo, kodwa futhi ngokusebenzisa isibani.
Kungenzeka futhi ukuthi usebenzise eyodwa lapho wire isigaba uqondiswa ngqo inzwa ixhunywe oxhumana inkinobho. I wire yesibili uxhumekile bese evala wesifunda isibani, icala langasezantsi libe emuva kubalulekile ukuba afeze konke okufanayo zero isigaba. Umehluko yalezi zindlela ezimbili kuphela khona samuntu inkinobho yesibili.
Isikimu yesibili inzwa motion okukhanyisa ikakhulukazi esetshenziswa, uma isidingo sikhona ukuthi ukukhanya ashisiwe isikhathi esithile futhi akuxhomekile izimo lapho idivayisi uzophendula.
Izincomo esiyinhloko ukufakwa:
Ngempela uqaphele ukuthi inzwa kumele ifakwe ziqala lapho zizwa okungenani 1 m ukusuka phansi enhlabathini. Kungenjalo, iyunithi izosebenza uma run by ikati noma inja, okuyinto Yiqiniso, ukukhanya ayidingeki ikakhulukazi.
Uma uhlose ukufaka idivayisi engela ukubukela 180 degrees, indawo ekahle kuye ukuba uphahla noma udonga isikhala.
Ngezinye izikhathi kuyasiza nge inzwa ukusungula ngesishintshi abavamile. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi ngakwesokudla izibani isikhathi vula noma vala.
Model, lapho emkhakheni buka uzimisele, ingafakwa kunoma iyiphi indawo, kodwa kufanele kuqashelwe ukuthi zabo umbono kumele kube umnyango, isibonelo umhubhe eside. Uma zonke into efanele okumelwe ngiyenze, ukukhanya ke uzobe zicinywe ngesikhathi kuvulwa futhi lokuvala.
Ukuze ukhethe idivayisi, sinake izimpawu zayo. Uma ekamelweni uba manzi ngokwanele, kungenzeka kuphela ukusebenzisa wire ekhethekile amanzi. Kumele kwenziwe kusengaphambili, okungcono ngesikhathi liqala kokuqala, ukuthola ukuthi ngabe inkinobho okufanayo, noma ngisho nohlobo oluthile ohlelweni, isibonelo ukupholisa kuyadingeka, ngoba ngemuva kokufaka kuzokwenza eziyinkinga.
Ukufaka ilayisense yomkhiqizo omningi osemqoka kanye obala LED
Mhlawumbe, abaningi bebhekene nenkinga ye babasa igalaji, kompheme noma endaweni yendlu ezizungezile. Yiqiniso, ungafaka i-flashlight abajwayelekile, kodwa ke kukhona izinkinga ukulawula ukukhanya, ezifana ukuvalwa kwama-osukwini lwayo, kanye iinthombe ebusuku. Ukuze ezishintshayo okugcwele motion inzwa ukukhanyisa ezitaladini noma ekhaya-ke lwakhiwe. Ukusebenzisa le indlela lula futhi kuthuthukisa ukuphila komuntu.
Ilayisense yomkhiqizo omningi osemqoka Wiring icebo ukukhanyisa ulula. Uma ezonini ye-apharathasi hits into, it is isiqalile. Ngu asibonisayo ngempela exhunywe asobala nje: kungase kube abavamile ukukhanya lwemidlalo. Ukuze ukufakwa ukukhanya kwenzeka kuphela ebumnyameni, e-apharathasi ezidingekayo ukuthi iThreshold emini.
Plus ukufakwa ilayisense yomkhiqizo omningi osemqoka kanye spotlight:
Ukonga okukhulu ugesi, njengoba ukukhanya uqala usebenza kuphela uma kunesidingo;
nokongiwa kwemithombo kanye nezibani LED;
ukuqedwa ephelele isici womuntu ekukhanyeni into;
adambise e ukufakwa kanye nokusebenza;
zokuphepha ezengeziwe izindlu lokukhuphula izinzwa azungezwe yendlu.
Lapho inzwa motion kwabangela
iyunithi egibele uzoqapha ncamashi isikhala ukuthi uthola ensimini yayo umbono. Ngakho ukuthi ngaphansi ingxenye ethile kufanele kukhethwe imodeli elifanele zedivayisi nezici oyifunayo. Uma ifaniswe kahle wesifunda ohlanganisa motion inzwa ukukhanyisa, ngeke ulungise ezingeni izinga amaza okushisa endaweni yomsebenzi wabo. Ngalezo zikhathi lapho ingeke ibe khona ushintsho, futhi isignali okukhipha ngeke. Uma emkhakheni observation kuyoba umuntu noma isilwane, izinga lokushisa okungenani kancane sibe sikhulu kunesihlalo izinzwa esibekiwe, ngokushesha kukhona ushintsho voltage isibani. Khona-ke uqala ukwakha uhlu lwabantu abalandelanayo pulses okunikela wesifunda ukulawula isignali. Iinsetjenziswa zokukhwela ukukhanyisa uqala isebenze kuye ekushoneni ipharamitha ukuzwela.
Ngakho-ke, ngemva into nge lokushisa ephakeme kunaleyo predetermined kokushiya indawo yokulawula, phezu okuyinto inzwa akuphendule, ukulethwa pulses okuqhubekayo usuphothuliwe, qala aqhume isixhumanisi ukuxhumana futhi ukukhanya uyaphuma.
Kuyinto lezi zici zenza ukusetshenziswa kwamadivaysi anjalo zithandwa kakhulu futhi ekahle kakhulu ezihlukahlukene izindawo, njengoba kungase kusinikeze isilinganiso esithile non-contact inkinobho amadivayisi ukukhanyisa. Ngenxa yalaba amadivayisi ngeke zisaba sokukhathazeka induduzo yakho futhi lula, okuyizinto ezidingekayo ukuze ezweni lanamuhla.
Izinzuzo main nemibi izinzwa
Nokho, ngaphambi kokuba ufake ukukhanyisa motion inzwa, kubalulekile ukucabangela zonke izinhlangothi ngaphambi ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo zale divayisi.
Amandla ukonga. Esikhathini esiningi abantu bayakhohlwa kokuvala izibani nokusebenzisa kumadivayisi ezifana le nkinga esiphuthumayo uyobe engasekho, njengoba kuzoba ngaphansi kolawulo othomathikhi.
Ukusebenza. amadivaysi eziningi zanamuhla isebenze kahle ngaphandle kokusebenzisa izintambo. Futhi kubo, uma kunesidingo, kungenziwa kalula bajoyine ezinye amagajethi ngaphezu ukukhanya, ezifana ithelevishini, air conditioning, emphemeni, umlandeli, umsakazo, hood, njll
Lula. Uma ekamelweni inkinobho kuyoba kungaphelele kude emnyango, ebumnyameni ukuthola ukuthi kuyoba nzima, futhi izingane ezincane, mhlawumbe scary. Inzwa aqede le nkinga.
Izindleko eziphezulu. Akusiyo imfihlo ukuthi wonke umuntu athole impilo enhle ukhululekile kumelwe thina mubi kakhulu, futhi alamu bayajabula ukuba lo mthetho. Intengo amadivayisi enjalo kuphezulu, kodwa umphumela ukuthi anika ukuvikela utshalomali.
Ukuba yinkimbinkimbi kwayo ukufakwa. Ukushayela motion inzwa ukukhanyisa kungenziwa kalula zixhunywe ngokwakho, kodwa namanje akekho onganikeza isiqinisekiso ngokugcwele ukuthi ukufakwa kuzokwenziwa kahle futhi idivayisi azosebenza. Ngakho uma ungakwazi, kungcono ukusebenzisa amasevisi we-professional abanolwazi ngubani hhayi kuphela ixhunyiwe, kodwa futhi ulungise ukusebenza idivayisi.
Ngokushesha endlini ukufaka smart umsizi kuyinkinga ngokwakho, kodwa futhi kuyabiza. Kodwa ukukhweza inzwa ekhoneni emnyama okudingayo, ngoba phela ungakwazi bayakhohlwa zonke izimo. Ukuze bavela okokuqala efulethini iyunithi ngokushesha uzovela okufanayo kwezinye izindawo, kanye inkantolo, uma kuyindodana, indlu yangasese. Ukuze uthole esezisetshenzisiwe induduzo lula!
Amafutha "Lukoil" 75W90 igiya: ukubuyekezwa, Ukucaciswa, izinga,
Melani Chiskholm: Biography, umsebenzi kanye nokuphila siqu
Thayipha sikashukela 2: ekwelapheni. ukuphathwa Modern abanesifo sikashukela sohlobo 2